Bulls anyịnya igwe ọ bụla dị mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Nyocha ehi na-elegharị anya - azịza na ajụjụ dị iche iche
Nyocha ehi na-elegharị anya - azịza na ajụjụ dị iche iche
Bulls anyịnya igwe ọ bụla dị mma?
Akwanjikwa, ezigbo nimble, igwe kwụ otu ebe n'agbanyeghị na ọ bụ 29r. Dịkwa ka ị kwuru, ọ na-asọmpi asọmpi. Ọ bụghị banyere ya bụ otu bike na ụmụ nwoke na TeamBỌR.na-agba.Ọnwa Ise 26, 2015
Taa na ndu BCpovOur onye ndu anyi nke iri na asaa na-ezite ya na ngwa ahia di ala na nke taya tayaNiceI nwere ike ijide! Nke ahụ mara ezigbo mma! Taa bụ ụgbọala mbụ anyị na MexicoAnyị si na Tucson gbadata wee gaa n'otu ebe a na-akpọ Canyon Canpper, okpukpu anọ karịa Grand Canyon, na n'ebe ụfọdụ ihe karịrị otu puku ụkwụ n'okpuru. N'ezie, ọ bụ anya na-ahụ. Anyị na-aga ebe a na-akpọ Copper Canyon Adventure Park.
Ogige ntụrụndụ na nsọtụ kaniyon. Ha wụnyere gondola. Akara pink dị na map a na-eme ka anyị laghachi n’elu mgbe anyị rụsịrị.
Akara ahụ na-acha anụnụ anụnụ nke na-esochi rim ahụ, a na-akpọ Ruta Panoramica, ọ ga-abụ ụzọ mbụ anyịMgbe anyị gbalịsiri ike ịmara ebe anyị ga-esi gbagoo ebe a, anyị mechara zute Luis na Ronaldo whomụnna abụọ ndị na-agba ọsọ n'ogige ahụ Mgbe anyị kwurịtasịrị banyere ọnọdụ anyị wee laghachi izute ha ị dịla njikere? Ndewo Nke a bụ mgbalị m na-esighi ike ịme ka m mata onwe m HelloEric, aha m bụ YukaYukaSc hon iji zute gị na gị? RonaldoLuisand LuisO yiri ka nwanne nwoke nwoke okenye bụ Ronaldo na-eduzi mkparịta ụka ahụ Ọ bụ ezie na Luis ga-eduzi anyị taa Ebe ọ bụ na anyị na-ekwu okwu n’akụkụ Spanish ọ bụla Anyị na-eji google sụgharịa iji kwurịta okwuM nwere ajụjụ Ma mgbe ahụ Ronaldo nwere ajụjụ ị chọrọ nke ahụ anaghị atụgharị nke ọma na anaghị m ekwu ihe ọ na-ajụ, mana echere m na ọ na-eche ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga ngwa ngwaYesOkay Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị nke Lewis na-amalite ngwa ngwa ok, anyị na-amalite anyị na-agba ịnyịnya Site ugbu a Luis Si m internet nnyocha Kwere Lewis nọkwa a 2012Jamis nzọ ụkwụ X3Off maka a ngwa ngwa mmaliteDammit, ọ na-hammering n'elu ugwu nta kwa! Ana m arụsi ọrụ ike ijide, mana elu na oyi na-atụ anaghị enyere m aka! Mma! Ezi! Dịla njikere ma ọ bụ chọọ ka ị gbasaa? mba, mma, odi nma? Ọ dị mma, Luis na-egbu ya! Ikuku dị ebe a, ma ọ bụghị naanị ịrị ugwu! Ọ bụ ngwa ngwa na ụmụ! Mara mma! Na-arịa ọrịa! N'ikpeazụ, anyị gafere otu obere obodo dị n'akụkụ ugwu ahụ Mpaghara Oké Osimiri Copper bi na Tarahumara, otu ìgwè ụmụ amaala amaara maka ogologo oge ha na-agba ọsọ Echere m na ọtụtụ ụzọ ndị anyị na-agba taa bụ na mbụ Tarahumara egwu.
Ndi Luis na Ronaldo Tarahumara? Enweghi m ohere jụọ ya. Ọ mara ezigbo mma! Ee! O doro anya! Ọfọn? JaOkay Divertido Kedu ihe ị chere? Divertido gịnị ka ị chere? Ọ na-atọ ụtọ, na-atụgharị atụgharị Ọ bụ ihe ịtụnanya na ọ dị mma Na nke a na-agba ịnyịnya igwe wee dị jụụ ebe a, SweetSketchy! Olee otú na akwa mmanụ a ?ụ? Enwere m obere ụjọYa? Ee, o nwere nnukwu oghere! YaAh, ọrịa, Nice, ị nọ ebe a steepụ? Uh, mbaAnyị nwara foto? Ajụrụ m Luis ọ bụrụ na ọ wuru okporo ụzọ a you wuuru ụzọ a? Ee? Wuru ụzọ a? Wuru ụzọ a? * Ihe na-aga n'okporo mmiri dịpụrụ adịpụ * you wuru ụzọ a? * Ihe na-aga n'àkwà mmiri dị anya * Ya? Chei, echere m na nkọwa ole na ole efuola na ntụgharị ebe a. Echere m na ọ na-anwa ịgwa anyị na ọ wuru àkwà mmiri na ejiri m n'aka na ọ na-arụkwa ụzọ ahụ.
Yuka na-eche afọ ole Luis dị afọ ole ka ị dị? Iri na asaa Iri..TenohSeteenteen? Asaa - de - afọ iri na ụma? Ee, SeventeenSev - de - teenSev - de - afọ iri na ụma? Anyị dị oke nzuzu Ee, ee ee Nke ahụ dị mmaYa, ị chọrọ ịga ịnyịnya ya? Ee! WowNke a bụ akwa mmiri Luis kwuru na mbụNiceSo nkume ebe aSickSweetWowHoly shitKit mara mma nke ukwuu na mbụ ụkwụAnyị ga-anọ n'elu nnukwu nkume dị n'ihu ya Ọ dịghị mfe! Aga m enyere gị aka? Trazọ ọzọ Ọ dịghị ụzọ ọzọ DownhillGood? Ee ou chọrọ ịgaKa goOkay na-ada ka ọ na-ekwu na e nwere ụzọ ọzọ ebe a dị ezigbo mmaDownhillOh, ọ dị mma! Bịa na kemfe dandy gondola anyị ga-alaghachi maka ikpere anyị ọzọ na atụmatụ ị gafere ụzọ ụkwụ ala Luis gbanwere Bikea 2004, Kona Coiler Anyị na-amalite obere oge na otu ụzọ ahụ mana anyị gbanwere ngwa ngwa n'otu ụzọ a na-akpọ 'Ruta el Lomo 'nke pụtara ụzọ azụ bụ ihe m chere n'ihi na ọ na-eso usoro akaraGood Site na nke a na ụzọ ahụ na-adị oke ma na-agba ọsọNiceSo siri ike! Olee otu i siri kwuo 'So hard'Difícil? DifícilMuy dificilMuy dificilTechic TrailTrailDer na-esote akụkụ na-enweta ọbụna aghụghọ aghụghọ na-ejupụta na nwa isi-sized nkume ọ bụ ihe a na-atụghị anya ị ga-agba ịnyịnya nke mara ezigbo mma! Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na gondola na anyị amaghị ogige a adị ebe ọ bụ na ọ pụtaghị na bekee google searches Anyị chọpụtara n'ihi na a Mexico gwara anyị banyere ya na obi dị m ụtọ ọ gwara anyị ụzọ ndị a dị mma ọkachasị nke mbụ na ọ dị ka ọ bụ ezigbo ahụmịhe Mexico na kedu maka Luis? Kedu shredder Ọ na-egosi n'ezie na onye na-agba ya dị mkpa karịa igwe kwụ otu ebe! Skillsfọdụ dị oké njọ njikwa njikwa igwe Eleghị anya ọ dị mkpa ikwu na p arche dị na steeti Chihuahua nke dị ugbu a ọkwa ndụmọdụ njem njem 3.
Ọ bụ ezie na anyị enweghị nsogbu ọ bụla n’ njem ebe ahụ. Ọ dị mkpa icheta na ihe egwu ahụ dị elu karịa ebe a, anyị ka nwere ọ reallyụ na ahụmịhe ahụ ma onye ọ bụla nwere ezigbo ọfụma n'ebe anyị nọ.Ma agbanyeghị, na-ekele gị nke ukwuu maka ikiri na ịnọrọ gnarled
Ebee ka a na-eme igwe igwe ehi?
Ebee kaEBULI mere? Ihe niile nke anyịanyịnya igweezubere ma nwalee anyị n'isi ụlọ ọrụ German anyị na Koln. Ozugbo anyi choro ka ha kwado ha ma kwado ha site na usoro ndi mba ozo, anyi na emeputa igwe na South East Asia n'okpuru ndi oru aka anyi.
uhm imara na mu na kenya rụkọ ọrụ na igwe mara mma na ọ mara ezigbo mma na m nwere nnukwu obi anụrị ma nwee ọ excitedụ na ya mana ugbu a anyị nwere nke carbon ka ọ na-enwupụta ihu igwe na-asọ oyi taa ka ọ zuru oke maka idozi ụgbọala. elu na-enye unu ụmụ obere tourlet's gohere anyị na-na na obere ụgbọala na niile ọgba tum tum na m niile Ngwa anyị nwere ike na-amalite na igwe kwụ otu ebe a mma lineup niile canyons ebe a ndị ọhụrụ niile maara nke mara mma ye dị mma ugbu a, anyị nwere .️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ Mgba tum tum ochie ndị m jiri mee na isiokwu ndị gara aga, dịka ọmụmaatụ nke a, nke a ka m ji mee ihe Escape2 m mara mma, mgbe ahụ, anyị nwere nke ejiri na Vimeoarticle m yana nke ahụ n'otu afọ Nwetara ihe karịrị nde 120, nke jọgburu onwe ya ma ọ bụrụ na ọ bụ nke ọzọ, nke ahụ dị mma nke ukwuu n'ihi na ọ bụ nke mbụ obodo freeride bike m na-eji.
Agbagburu m edemede mbụ Alaeze Ukwu m na nke a, mgbe ahụ anyị nwetara ọwa mmiri niile ebe a. Nke a bụ n'ezie nwa m dị ala, ọ bụ 29er n'ihu na azụ nke ahụ na-agba oke ọsọ ọsọ ma ọ dị ka nke ahụ mgbe ị na-arịda ala ma chọọ ịchụso ngwa ngwa, nke a bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe maka m na akụkụ niile gbara gharịị site na Seat sqlabsignature Seat na uh m gara aga nkwusioru na uh dt Switzerland rim, nke mere na ọ bụ n'ụzọ ziri ezi gbanwee ọzọ anyị nwere Torx m abụọ na-acha ọcha torques ebe a uh m nwekwara ọzọ torque na oroma, e, na-acha ọcha-oroma n'ụlọ m ebe m na-eji m ama egwuregwu maka Myisraelis. Jiri obi eziokwu, torque bụ eleghị anya m kasị mmasị igwe kwụ otu ebe na m nọkwasịwo ndụ m niile n'ihi na nke kacha mma anyịnya igwe maka freeriding bụ na i nwere ike ime teknuzu stof na ị nwere ike amasị ibu nnukwu jumps kụrụ mara mma nke ukwuu ihe ọ bụla a igwe kwụ otu ebe na-amasị ya super jụụ na niile mbinye aka akụkụ na mgbe ahụ anyị na nwere ụdịdị dị iche iche na na ntọlite ​​nke a spektral bụ ọtụtụ dị ka ụdị ụfọdụ nke trousyi.
Echere m n'ezie iwu igwe igwe igwe nke dị ka igwe kwụ otu ebe Atruss na ọ bụ ya mere m ji nwa ịnyịnya a ma anyị nwetakwara eriri ogologo ka m wee nwee ike ịme mmanya na-atụ ma na-enwekwa coaster n'efu ebe a anyị nwekwara Maguria mt5brakes mbinye aka m na uh in black gold design here we have the e-bike super sick bike ọ bụ ụdịdị dị iche iche nke kaniyon bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe, m na-ekwu, m nwetara ya izu abụọ gara aga ma enwere m ọtụtụ ebe, yabụ, igwe kwụ otu ebe a na-enwe mmetụta nke ukwuu, ọ dị ezigbo mma ma ị naghị enwe mmetụta dị ukwuu nke a, nke m na-ekwu na m masịrị atụmatụ ụkwụ na ya ma nwee ọfụma ole na ole, n'ihi ya, ọ na-eche ezigbo ọrịa, yana akụkụ mbinye aka niile dị nnọọ n'ozuzu e-anyịnya igwe bụ fun. Echere m, Amaara m na o nwere ike ịbụ na ụfọdụ ndị nọ ebe ahụ ka na-akpọ asị e-igwe kwụ otu ebe, mana mgbe ị, mgbe ị? anwaala m e-igwe kwụ otu ebe ị maara ihe mere m ji kwuo na ọ dị mma na ọ na-atọ ụtọ ma na ebe a anyị nwere ihe dịka igwe kwụ otu ebe pụrụ iche m nwetara ya taa nke bụ ara ara m na-eche ya oge ụfọdụ mba wum ị maara mụ na Kenya rụkọrọ ọrụ na igwe ahọpụtara ma ọ dị mma nke ukwuu enwere m ezigbo obi ụtọ ma nwee ọ excitedụ mana ugbu a anyị nwere nke carbon ka canyon nyere m aka wulite igwe kwụ otu ebe nke m ma ebe a ka anyị bụ n'ihi na anaghị m agbago ya , ma obi dị m ezigbo ụtọ ịnwale ma hụ otú obi dị ya. N'ezie, nke a bụ okpu igwe uhie uhie m mbụ m nwetara.
Echere m, m ka nwere ike icheta ụbọchị m nwetara ya na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ anọ ugbu a, nke bụ nnukwu nzuzu iche echiche, bụ n'ezie nrọ n'oge ahụ, ee, ụfọdụ okpu na-acha uhie uhie uhie, uh helets heller, simone by helms Daniel Helmund mgbe ahụ enwere m ụmụ ọhụrụ ọgba tum tum m, ehee, igwe kwụ otu ebe mara mma, nke ahụ bụ uh, nke ahụ bụ ịgba ịnyịnya n'efu, uh, igwe kwụ otu ebe mara mma, nke ahụ bụ igwe kwụ ọtọ na-adịkarị n'okporo ámá ọ na-atọ ụtọ ebe a anyị nwere ktm Sfọdụ n'ime unu nwere ike ịma na nzụlite m bụ n'ezie ọkwọ ụgbọala motocross na m tolitere na motocross mgbe m chere na m dị afọ isii na otu motocross nwere ike bụrụ ọkacha mmasị m n'oge niile wee mara na ịgba ịnyịnya ígwè bụ ihe dịka egwuregwu ahụ bụ nke kachasị na motocross. Mgbe m na-enweghị ike ịgba ịnyịnya motocross m hụrụ n'anya ịnọ na igwe kwụ otu ebe, yabụ ee, ee, mana m ka na-ahụ n'anya na-agba ịnyịnya motocross ọ dị nwute na enweghị m oge ịnya ihe ahụ mana mgbe ọ bụla m mere na egwu ahụ ọ dị ịtụnanya, ọ na-esiri m ike a omenala imewe na agbanyeghị ezigbo igwe kwụ otu ebe ka ụgbọ mmiri ka anyị banye n'ime, anyị nwere anyịnya igwe atọ ọzọ n'ime ya, ha niile mara mma pụrụ iche na uh filmed ụfọdụ isiokwu dị mma banyere ya, yabụ ka anyị nwee igwe pụrụ iche atọ pụrụ iche ebe a, ị nwere ike niile mara, ọ bụ bike si m uh mepere emepe ọkacha mmasị ndụ iyi isiokwu na m filmed na France na paris na mmanụ na nke ahụ bụ kpọmkwem igwe kwụ otu ebe m mere maka m 25th ụbọchị ọmụmụ iji steepụ stumpit si ara m nwere a flat taya n'ihu na azụ m ọbụna na-etinye ụfọdụ fụfụ na aka m naanị iji jide n'aka na anaghị m akụda m isi na ume m na aka m b egg agbajiri ya nwetara ya n'ụdị dị njọ mgbe m rutere na steepụ 25 yabụ ee ee ebe a anyị nwere canyon torque ihe ọzọ eji m na israel m bu ebe egwuru-egwu m edemedeum nke ahu masiri o bụ nke isiokwu kachasị mma m megoro ya na odida obodo ahụ dị ịtụnanya yabụ ee nke ahụ dị ezigbo mma ma ọ bụkwa isiokwu mbụ m mere na Kenya n'oge ahụ soyeah ọ bụ njem dị jụụ na ebe a anyị nwere kenyanchoice mbụ m igwe kwụ otu ebe ọ bụ na, na m na-eji na m um myhome ụlọ ọrụ isiokwu ọ bụ aluminom na nke a bụ mma nke ukwuu nke mbụ yiri prototype anyị mepụtara na uhcanyon otú ọ mara mma pụrụ iche na ị maara nhọrọ nke inwe omenala Nchaji igwe kwụ otu ebe maka m ụlọ bụ mara mma na ee ekele kenya maka ime ka ọ mee wee hụ gị oge ọ cheụ
Kedu igwe eletrik kachasị mma maka ego ahụ?
ANCHEER 20MPHEbike:Kacha mman'ozuzuigwe eletrik
MGBE AH 20 20MPHEbikedị mfe na-enweta mmeri n'ozuzu yaigwe eletriki kacha mmanke 2021 Atiya. Dị a na-aghọ ngwa ngwa kachasị ewu ewuebikendị na-emepụta ụwa dị iche iche nke ụdị ewu ewu na nke ọnụ ahịa dị oke ọnụ.
Chei ụmụ okorobịa, ka anyị kwuo maka igwe elektrọnị dị ọnụ ala karịa n'ahịa ugbu a. Dị ka nke 2012, M kpuchie Olee ihe enyemaka 191 nke ndị a anyịnya igwe na m na-eche ihe ọ bụla n'okpuru $ 1500 bụ oké ọnụ. Ekpuchighị m igwe kwụ otu ebe ọ bụla dabara n'ụdị a, m na-agụkwa ya, biko mee ka m mara ihe ị chere.
Ma eleghị anya, agbaghara m ihe ọ bụla na m nwere ike ịdebe nke ahụ wee kpuchie ya n'ọdịnihu. Aga m na-emelite ụdị a. Nọgidenụ na-ele anya na ọwa a na ebe nrụọrụ weebụ m nyocha igwe eletriki igwe eletrik .com ebe m na-atụle ihe niile.
Ọ bụrụ na ịnọ ebe ahụ, lelee ebe a na-enwe nzukọ, n'ihi na ọ bụ ebe ezigbo ndị nwere igwe kwụ otu ebe karịa ụbọchị ole na ole nwere ike biputere nyocha. Nke ahụ bụ ebe ha biputere ha isiokwu na foto na stof. Ọ bara ezigbo uru.
Yabụ ka anyị bido ozugbo, m ga-agwa ụnụ ụmụ okoro m ihe ndị kachasị elu bụ. Nke mbụ bụ RadCity. Nke a bụ ihe m na-ahọrọ.
The igwe kwụ otu ebe bụ kediegwu. Ọ bụ dị ka n'ụzọ zuru ezu melite na Fenders. Ọ bụ taya mgbapu àmà, n'akụkụ mgbidi na-atụgharị uche, ọkụ wuru na ọ na-abịa na ọkwa abụọ na ọkwa dị elu yana enwere ntakịrị nha dị n'etiti abụọ ahụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye na-anagide ihe ma ọ bụ naanị chọọ etiti siri ike karị, ị ga-enweta ọkwa dị elu. Ọnụahịa ahụ dị ebe ahụ maka $ 1,500. Naanị ihu na ihu igwe kwụ otu ebe a bụ igwe breeki igwe eji arụ ọrụ.
Ugbu a, a ka nwere ndị rotor 180 millimita na ndị a dịtụ mfe iji dozie na hydraulic, mana chọrọ ntakịrị aka aka. Rad na-arụ nnukwu ọrụ. Ha nwere otutu ahia.
Ha nwere ezigbo aha na US, Canada na mba ụwa. May nwere ike ịhụ ụfọdụ mkpesa na ntanetị banyere igwe kwụ otu ebe a, mana echere m na ọ bụ n'ihi na ha na-ere ọtụtụ ngwaahịa. Wheel bụ n'ezie onye mgbasa ozi na saịtị ahụ, ma achọrọ m igosipụta nke a, mana naanị m na-akpọ ụlọ ọrụ ka ha kpọsaa na m tụkwasịrị obi n'ezie.
N'ezie, papa m na nne nne m nwere RadRovers, nke bụ taya ha mara abụba, ha na-esikwa otu batrị kwụpụ site na nkwụsị. Yabụ ị nwere ike ịgbanwe n'ezie n'etiti ụdị dị iche iche na ịregharị uru nke ụdị ndị a na-adịkarị mma. Maka m ọ bụ ihe dịka nnukwu foto ebe a.
You're na-enweta nnukwu ọnụahịa, ngwaahịa bara ọgaranya nke dị na ngwakọta ụdị etiti dị iche iche yana nkwado ndị ahịa dị ukwuu ma ha nwere vans nwere ike ịnapụta ma chịkọta gị igwe kwụ otu ebe. Ọtụtụ mgbe ị na-azụta igwe ndị a dị ọnụ ala karịa na ntanetị ma ọ na-egosi na nnukwu igbe. Mana na Rad, ị nwere nhọrọ ole na ole iji mee ka onye ọrụ ahụ nwee ọfụma ee ee ọ bụ otu n'ime echiche m kachasị mma.
Ihe na-esote bụ igwe eletriki kachasị ọnụ ala na ọnụahịa kachasị mma maka ego ma ana m ịghọ aghụghọ ule na nke a n'ihi na echere m na ọnụahịa ahụ bụ ụdị m gara maka Model Y site na Electric Bike Company. Ugbu a, ụlọ ọrụ Electric Bike dị na Newport Beach. Ha na-ere ntanetị dị ka Rad, mana ha enweghị ọrụ nnyefe mkpanaka ma ha enweghị isi ụlọ ọrụ na Europe na Canada.
Ma ngwaahịa ha na-efu ntakịrị karịa ka 1699 gbakwunyere 189 mbupu, ngwaahịa ha nwere diski diski hydraulic. I nwere engine di ike nke ukwu. Have nwere nkata a dị jụụ nke batrị na-adaba na ya n'ihi ya nwere ike ịba uru.
Etinyere m ụdị batrị na okpokolo a. Echere m na ị nwere ike ịbawanye ikike nke batrị a site na itinye nkata. Companylọ ọrụ a ga-agba agba agba osisi ahụ, rim ahụ, nkata, ha nwere ihe ndị eji ebu ibu.
Ha nwekwara akara mgbapụta na-egosipụta ntụpọ wuru na ọkụ. Igwe ndị a dị mma nke ukwuu n'echiche m, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ dị ukwuu na nkwado ndị ahịa. Ya mere, maka m, m na-akwụ obere ego karịa maka ihe dị ka nke a, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị dị mma na njem ụgbọ mmiri, ọ ga-adịgide dị ka igwe kwụ otu ebe a na-arụ ọrụ nke ọma.
Ọ ga-enye gị arụmọrụ ahụ, ọ nwere ọsọ ọsọ yana enyemaka aka. Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya. Na-esote bụ nhọrọ dị oke ọnụ, nke nwere ọnụ ala, ọ dịkwa maka Rad kwa.
Ha na-eme ihe magburu onwe ọrụ na-ndị na price ihe, na ha dị nnọọ ulo oru a ọhụrụ nlereanya a na-akpọ RadMission na 999. Ya mere, na ngwaahịa a bụ otu ọsọ, ọ na-enweghị asaa Kwadobe dị ka RadCity ụdị na n'ezie ọtụtụ ndị ọzọ na igwe kwụ otu ebe anyịnya igwe . Ma ọ dị ntakịrị arọ, ọ dị arọ karịa ka m tụrụ anya maka otu ọsọ, mana ọ nwere ezigbo ibu ibu yana ọ nwere otu ugwu dị n'ihu ka ị wee tinye mgbakwunye ihu.
Ngwa niile na-agbanwe agbanwe, gụnyere batrị ebe a, yabụ ike batrị dị ntakịrị ala karịa ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Nke ahụ bụ akụkụ nke otu ha si enweta mkpado ọnụ ma na-eme ka ọ dị mfe ma na -adịghị ka ọ dị mfe, ha n'ezie nwere ngọngọ yinye tensioner nke bụ n'ezie ọmarịcha na ha ka nwere gas na ha ka na-atụgharị uche ntụpọ egosi taya, yabụ na ị nwere otu agwakọta, ọkara larịị na otu akwa larịị nakwa agba isii dị iche iche. Nke ahụ dị mma maka igwe kwụ otu ebe $ 1000.
M ga-ahụ ngwaahịa na Amazon ma ọ bụ Costco ma ọ bụ Walmart na ọ dị ka, hey, $ 1,000 na o yiri ka dịkwa mma. Enwere m ike ịhụ ya, enwere m ike imetụ ya aka, mana ogo na-adịkarị ala. Na ahụmahụ m, nkwado ndị ahịa fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị.
M n'ezie enyocha anyịnya igwe na-eresị na Amazon na site na mgbe m nwetara na igwe kwụ otu ebe, meghee ya, enyocha ya, na gwa anyị igwe kwụ otu ebe, na igwe kwụ otu ebe bụ agaghịkwa dị online na nke ahụ bụ ihe dị nzuzu na ọ gosipụtara ọzọ. Yabụ na ọ dịka ndị mmadụ na-azụ ngwaahịa a yana ọ ga - abụrịrị nke nwere ike iwepu na nke ahụ bụ bummer n’ihi na igwe kwụ otu ebe a nwere ike ịdịgide ma ọ bụrụ na ị lekọta ha anya. Yabụ na ụlọ ọrụ dịka Rad, ebe ha nwere batrị a kwadoro nke ọma, ha nwere ngwa ọrụ ndị a niile ma ha nwere aha ọma na ịntanetị, maka m nke a bụ ihe kachasị mma ị nwere ike ime iji banye na nke ahụ. Igwe eletriki igwe eletriki spa iji gaa ce. Nke na-abịa abịa igwe kwụ otu ebe akpọrọ na ụdị a.
yt igwe kwụ otu ebe
Ya mere, mgbe m tụlere igwe eletriki igwe eletrik, m gbalịrị ịghara iju mmiri na saịtị ahụ na mgbasa ozi ma ana m akpọ ụfọdụ ụlọ ọrụ m chere na ha nwere ezigbo ngwaahịa iji kwalite igwe kwụ otu ebe ha site n'ụdị ọnụ ala ma ekwuru m ya ebe a mana ekwenyere m na ngwaahịa a. Echere m na ọ bụ ezigbo ihe. O doro anya na ọ sitere na Rad Power Bikes, nke ahụ bụ RadRunner. Ugbu a ọ dị na ụdị ọkọlọtọ a na-akpọsa; ọ bụ singlespeed, yiri RadMission.
Ihe puru iche banyere igwe ugboala a bu na odi ka igwe obere igwe, ma obu a na akpo ya igwe eji aba uru. Ọ bụ obere ala na ala, obere wiil, ma ka fọrọ nke nta ka ndị abụba taya sentimita asatọ tụnyere sentimita anọ, nke na-enye gị nkasi obi dị ka ọ na-enweghị a nkwusioru ndụdụ na-enye ya ohere ịga-ụzọ, ma eleghị anya site na snow na ájá ma ọ bụ naanị larịị naanị site na ala dị nro, dị ka ahịhịa, ọ dị mfe ntakịrị Super 73 ma ọ nwere nhọrọ oche oche ogologo ka ị nwee ike iburu onye njem na mkpọ, ma oche dị ka onyeisi ụgbọ mmiri ahụ dị n'oche oche nke na-agbago na ala ka get nweta mgbatị ụkwụ zuru ezu ma nwee ọmarịcha ọfụma, ịnya ụgbọ ala, ọkụ ahụ, akara mgbapụta na-atụgharị uche na taya na nkwado na netwọkụ na ihe niile m kwuru maka ya maka Rad. N'ihi ya, ọ dị m mma ịhụ igwe kwụ otu ebe a.
Ọ bụ 1199, ọ bụghị karịa RadMission, mana ọ na-echekwa gị ụfọdụ ego ma e jiri ya tụnyere ụfọdụ ụdị RadCity, RadRover, ma ọ bụ RadWagon. Ọ bịara n'ezie n'ihu RadMission. M bụ ụdị nke anya n'ihi na m mechara chee Rad bụ ibu oké ọnụ igwe kwụ otu ebe.
Na ya ka o mee ihe di iche na nke bara uru, dika ihe eji ebu ibu, echere m na obu ihe puru iche. Dị ka ọ dị ezigbo mma maka ndị mmadụ ịnwe igwe kwụ otu ebe a. Ọ bụrụ n ’ị dị njikere ịkwụ obere obere, ịnwere ike ịnweta RadRunner Plus, nke nwere fọkdụ nkwusioru nke nwere nkwalite ọkụ na ngwongwo ndị njem, gbakwunyere ụgbọ okporo ígwè ọsọ asaa.
Maka m ọ bara uru ego ahụ ma kpuchie nke ahụ na weebụsaịtị. Ọ dị mma ụmụ okorobịa, nke ikpeazụ bụ Mkpọrọ Nsọpụrụ na nke ahụ na-aga Electra Townie 7D, nke na-anọchi anya ọsọ ọsọ 7. Electra bụ nke Trekand Trek bụ otu n'ime ndị na-emepụta igwe kwụ otu ebe atọ, Trek, na Specialized, nke ahụ kwesịrị ka a rịba ama na ụdị ndị a nwere ụlọ ahịa na United States na mba ole na ole ọzọ - ị nwere ike ịga ije n'ezie na ị nwere ike ịme mgbanwe ndị bara uru na Ule igwe kwụ otu ebe.
Fọdụ n'ime ihe ndị pụtara ìhè bụ na nzụta a bịara na agba asaa dị iche iche nke mara mma. Ọ na-aga na mkpuchi yinye. Ọ bụghị naanị ntọala.
Agbanyeghị, ọ nweghị fend. Have ga-akwụ ụma maka ha ma ha agaghị ese ya. Ọzọ uru bụ na ọ bụ dị na ma elu-etoju na a zuru etiti imewe, dị iche iche etiti size nwere ike ịbụ ihe nke a nke nwoke ma ọ bụ nwanyị style, dabere na nke etiti ụdị ị na-ahọrọ.
Ihe bụ, mgbe ị na-enweta nzọụkwụ-site na etiti, ị na-ejedebe na a obere ihe etiti mgbanwe. Echere m, batrị na a igwe kwụ otu ebe bụ mara mma nke ukwuu kwupụta azụ na mara mma elu. Dika odi, ichoro ibu di ala na etiti, nke bu ahia ozo.
Ma batrị bụ mbughari otú i nwere ike ikwu ya iche na igwe kwụ otu ebe. O nweghị gas, ọ bụ naanị enyemaka ụkwụ. Na brek ndị a bụ n'ibu vesos haịdrọlik.
Ikwesiri iji ike aka gi karie ike ma ha adighi nma, ha enweghi igwe mmechi. Nke ahụ bụ n'ihi na igwe kwụ otu ebe a na - eji ihe mmetụta igwe na - arụ ọrụ kama ịnwe ihe mmetụta dị ka ọtụtụ ndị ọzọ nọ na ndepụta a. Nke ahụ pụtara na ọ ga-ama mma ozugbo ịmalitere.
Ma, ị ga-arụ ọrụ ntakịrị karịa na nke ahụ bụ akụkụ nke ihe na-enye igwe kwụ otu ebe a ezigbo mma, n'agbanyeghị ịnwe obere batrị, taya ndị ahụ anaghị eguzogide mgbapu, ha enweghị mpempe akụkụ mgbidi na-atụgharị uche, igwe kwụ otu ebe a adịghị 'abịa na ọkụ. Yabụ ị nwere ike ịkwụsị iji ihe karịrị $ 1,500 mee ka ọ bụrụ nke a ga-eji tụnyere ụfọdụ igwe kwụ otu ebe anyị kwurula banyere ya na mbụ - ị nwere ike ịga ozugbo ụlọ ahịa ahụ, ị ​​nwere ike ịhazi ụfọdụ ebe ahụ wee nwee onye ga-enyere gị aka n'anụ ahụ. Chọghị ichere ka ndị mmadụ ziga ihe n’iru.
Yabụ n'echiche nke m, nke a bụ nhọrọ dị oke mma, ọ dabere na mkpa ngwa gị. Ọfọn ndị mmadụ, enwere m olileanya na nke a nyeere gị aka, ụdị ọnụ ọnụ bụ otu n'ime ewu ewu na Traffic, enwere m ike ịghọta ihe kpatara na ị nwere ike ịnweta igwe kwụ otu ebe n'oge na-adịghị anya ma ọ bụrụ na ọ naghị efu nnukwu ego. Ma ị nwere ike ịnụ ụtọ ọgba tum tum ahụ ma enwere ike inwe udo na jụụ, ọ bụrụ na ezuru ya, ị gaghị efu nnukwu ego.
Ma ọ dịkarịa ala nke ahụ na-agafe isi m, n'ezie, enwere oge ọ na - eme, ikekwe ịchọrọ ịkwụ ụgwọ ntakịrị maka igwe kwụ otu ebe, ụgbọ ibu ibu, ma ọ bụ ụdị edemede ọ bụla enwere m ndepụta a maka ụdị 11 kacha elu na websaịtị kere ma cheta nyocha ndị a niile nwere ederede nkeji 30 na stats niile na ihe niile dị omimi ma ọ bụrụ na ịchọta ihe masịrị gị na ndepụta a wee pịa obere ngwa ọrụ atụnyere. Jiri ya tụnyere ụfọdụ nhọrọ ndị ọzọ dị na nke a na otu ndị ọzọ. Nzube m bụ inyere gị aka ịchọta igwe kwụ otu ebe ịchọrọ ka nke a dị, nke ahụ bụkwa ihe m na-achọ inyere gị aka ịbelata ya ntakịrị, mana ekpuchibeghị m ihe niile.
Ya mere, mee ka m mara na ihe ndị ọzọ, ma eleghị anya, m na-ezighi ezi na ị ga-arụ ọrụ iji jide n'aka na ekpuchikwara ya. Aga m abanye n'ime omimi ma nwee olile anya inyere gị aka. A hụrụ m gị n'anya.
Lee gị ọzọ.
Kedu ụdị akara igwe kwụ otu ebe kachasị mma na Philippines?
Kacha mman'ozuzu: SAVA Deck 300.
Ọ dị mmauru maka ego: Agha 590-D MountainIgwe kwụ otu ebe.
Omume niile gbara gburugburu: SAVA Set Set MountainIgwe kwụ otu ebe.
24 na-agba ọsọ foldableigwe kwụ otu ebe: Vmax LH ịkpakọbaIgwe kwụ otu ebe.
Mmefu egoigwe kwụ otu ebe: FkpakọbaIgwe kwụ otu ebeAB2006-TLS13 Ntụrụndụ Aleoca.
Ọ dị mman'ihi na ike ike teren: Agha mara mma-670.
Anyị na-na azụ Taipei maka Taipei Bike Gosi, ndị kasị ibu n'ụwa igwe kwụ otu ebe show na njem, na n'isiokwu a anyị na-egosi gị ihe ndị kasị akpali akpali anyịnya igwe na ngosi ebe a (Music) Oh, ugbu a dị oké njọ bike porn oge. Nke a bụ oge Alpe d'Huez na ọ bụ igwe kachasị ọhụrụ na nke kachasị mfe na TIME. Ahụtụbeghị m igwe kwụ otu ebe na-eme ka eriri carbon dị na etiti ahụ mara mma.
Ọ dị ịtụnanya. Ma nke ahụ bụ obere n'ihi oge TIME na-eme igwe. Kama iji usoro ọdịnala nke ịtọba iberibe carbon n'elu ibe ha dị ka ihe mgbagwoju anya 3D, TIME na-ejikọ okpokolo agba ha na eriri eriri carbon eriri n'ime ngalaba ọkpọ ndị a.
Ihe si na ya pụta bụ ụkpụrụ a dị ịtụnanya ị nwere ike ịhụ n'okpuru eserese, na ụdị ihe atụ a, ha jikọtara ya na otu nnukwu ndekọ na wiil ndị ahụ Corima na ha nwekwara ụdị eriri carbon nke na-agbakwunye na mkpokọta mma nke b. enwere ụfọdụ mmetụ dị mma nke ukwuu, dịka ọ nwere Jagwire Link Shift cable sleeve nke dị oke nha, ma ọ bụrụ na i lee anya n'azụ ha nwere otu Jagwire Link Shift cable setịpụrụ nke bụ n'ezie ọkụ dịka m tinyere obere aghụghọ. hue ebe a site na-agbanwe agba n'ihi na ọ na-abịa dị iche iche na agba. Nke ahụ bụ nkọwa mara mma nke ukwuu, ọ masịrị m.
Otu obere ihe dị jụụ nke kwesịrị igosi na igwe kwụ otu ebe a nwere teepu aka Jagwire, nke bụ ngwaahịa ọhụrụ, pụọ ebe ahụ. Mara mma jụụ. (jụụ music) M hụrụ n'anya a bit nke ochie-oge a edinam na a Yasujiro-eme m obi ụtọ nke ukwuu.
Ya mere Yasujiro bu aha igwe nke malitere ime igwe igwe na 1920 ma na-aga n'ihu ruo taa, mana enwere ya na ugbua Campag Bora Ultra 35 tubular na otu Campag Super Record. Ihe a masịrị m. Ya mere akpa ndị ahụ bụ Tangsteel, molybdenum-chromium alloy na nchara dị oke mma, nke sitere na ya ka eji eme igwe igwe KEIRIN na Japan.
JonCannings ga-ahụ nke a n'anya, na nri nke studs bụ naanị ọmarịcha mgbe ị hụrụ ezigbo nso nkọwa dị, nke niile na-aka-ebipụ. Ma na ị nwekwara chrome ndụdụ ahụ na igwe kwụ otu ebe n'ozuzu ya, ọ bụ igwe kwụ otu ebe dị oke mma, ma amachaghị m banyere eriri eriri, enwere m ike ịgbanwe nke ahụ ma ọ bụrụ na m nwere ya ma ọ bụ nke m. N’ebe ahụ n’elu nnukwu nkwudo ahụ achọpụtara m EnviLiv a mara mma.
abs flutter kicks
Ugbu a EnviLiv apụla obere oge na nhazi ahụ agbanwebeghị, mana nke a bụ ọrụ ọrụ agba ọhụrụ nke m na-ahụtụbeghị mbụ. Ma ọ mara mma, ọ nwere ọcha a na-acha ọcha na ụdị ụdị ọlaọcha ọla edo nke m na-ahọrọ karịa agba ndị nwoke. Achọrọ m nke a.
Nwere ike ịtụ anya ịhụ Marianne Voss na igwe kwụ otu ebe dị ka nke a, mana Giant nwekwara ụfọdụ agba ịnyịnya agba pụrụ iche maka ngosi ebe a na m ga-egosi gị n'ihi na ha dị oke ịtụnanya. Ma lee anya na nke a, nke a bụ EnviLiv ọzọ, mana ọrụ Pai nt a bụ ihe ịtụnanya, ụdị ọmarịcha ọla edo na-egbu maramara na ọ nwekwara otu ndị nnweta SRAM dị na ya. Abụ m nnukwu onye ofufe, nke a dị ịtụnanya.
N’ebe a, anyị nwere Giant TCR nke emere ka agba ya nke ọma. Ọrụ agba a dị egwu, ọ bụ ọkọlọtọ Italiantali, yabụ na ị nwere ọbara ọbara, ọcha na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mana ọtụtụ nkọwa ọla edo, nke na-egbukepụ egbukepụ nke ukwuu, akara ngosi dị ukwuu na tube dị ala na ụdị swiiti ahụ na-acha uhie uhie na na Campagnolo super ndekọ. Ahụbeghị ọtụtụ ndị Refeyim na Campagnolo Super Record.
Ọ bụ igwe kwụ otu ebe pụrụ iche, ahụrụ m ya n'anya, ọ dị mma. (jụụ music) Lee nke a. Echere m, M hụrụ n'anya a ọma vajazzle na m na-ndammana dọtara a pụtara KTM Revelator.
N'adịghị ka ihe ị nwere ike iche, KTM emeghị Essex, ee! Emere ha na Austria. Ma n'ihi na emere World Championship na Tyrol Austria n'afọ gara aga, KTM jikọtara ya na kristal Swarovski iji mepụta nke a. Ọma lelee ya! Ọ bụ ụdị mara mma nke igwe kwụ otu ebe na ya nwere obere kristal ọla edo ndị a na obere obere ojii na oghere karama na akara KTM.
Ọ bụ nnọọ breathtaking. M na-eche ma kristal ahụ na-eme ka ọ dịkwuo elu. Onye ma? Ka o sina dị, e rere ya n'ihi ezi ihe ma bulie $ 12,000 maka ọrụ ebere dị mma! Onye ma na Pimp my Brompton bu ihe? Ọ bụ ihe a na-apụghị ikweta ekweta.
Echere m na nke a bụ igwe kachasị amasị m nke m hụworo na ihe nkiri ahụ. Yabụ na ọ bụ ihe ịtụnanya Brompton na ụlọ ọrụ Taiwanese RIDEA kpara ya wee mado ya n'ọtụtụ mmiri. M hụrụ n'anya otú ha na agba-achikota ndị a niile ọlaedo nkọwa na dum igwe kwụ otu ebe na fillet soldering na etiti, ọ bụ nnọọ mma na N'ezie ọ nwere seramiiki biarin na drivetrain mgbe (na-achị ọchị) Ọ dịghị mgbe m chere na m ga-enweta a Brompton nwere ikuku ikuku dị omimi, maka uru ikuku ndị a niile mgbe ị na-ebupupụta, ịpụ n'ụgbọ okporo ígwè na ndị dị otú ahụ.
Odi m ka m mara ika a .ITEK. Amaghị m ebe. (Music dị jụụ) Nke ahụ bụ Trek Madone Disc.
Ọ dịghị ihe ọhụụ ịhụ ebe a, ọ nweghị ihe gbanwere ma e wezụga ọrụ agba, nke m na-emetụbeghị mbụ. Ọ bụ ụdị ahụ mara mma nke Nardo Gray nke dị ka ụdị egwuregwu Audi na-agba ụda abụọ, ị nwekwara matte na ọla ọcha na-egbukepụ egbukepụ, mana ọ dị egwu. Ọfọn, m chọrọ otu na agba.
Nke ahụ mara mma. Ngwaọrụ a dị mma bụ Trigon HC01 ọhụrụ. Ọ bụ igwe kwụ otu ebe na na ahụtụbeghị ya mbụ, mana maka ezigbo ihe kpatara na ọ pụtabeghị! Edere ya maka ịhapụ na June ma ọ bụ Julaị nke afọ a ma ọ dị ezigbo ọkụ.
Maka nha 56, ọ kwesịrị ịdị naanị 1050 grams maka usoro etiti ya niile nke na-asọ mpi n'ezie. Ọ bụkwa ihe na-atọ ụtọ ịhụ na o nwere atụmatụ ikuku nke etinyere n'ime igwe dị fechaa, nke siri ike, dị ka ọdụ ụgbọ elu ebe ị nwere ndị FOCUS IZALCO MAX agbadata oche nọkwa. Ihe owuwu a nwere ihe ndi ozo nke oma site na Black Techso anyi nwere carbon carbon zuru oke ma lelee wiil ndị a! Ndi ahihia ahihia ndia, nke buru ibu, yiri ka ha putara ahia, obughi ha? Chaị.
Ha kwesiri itu naanị gram 1300 maka otu maka usoro nlebara anya nke carbon ka anyị wee nwee ọmarịcha ebe a. Ugbu a Trigon bụ Taiwanese ika malitere outperforming anyịnya igwe maka ndị ọzọ na mgbe ahụ chere na anyị mara mma na ya. Ya mere o kpebiri iji aka ya wuo nke mbido 2000s, mana kedu ihe ị chere? nke ahụ? Ihe Trigon HC01.
Mee ka anyi mara na ngalaba a. (egwu dị jụụ) Nke a bụ e-bike JIVR. Ọ bụ e-bike foldable.
Ma i nwere ike iche na ọ bụ obere iju. O nweghi ugbo ala. Olee otu o si aru oru? Ọfọn ọ nwere ikike, ọ bụghị anwansi.
Naanị na ọ bụghị n'echiche ọdịnala na agbụ na sprocket. Kama nke ahụ, ọ nwere ihe eji arụ ọrụ n'ime ya nke na-agbadata ebe a na nke ahụ jikọtara ya na eriri nke jikọtara na mpempe azụ a ebe a, uru nke afọ dị mma nke na ọ kwesịrị inye ịnyịnya na-enweghị mmezi. Ihe gara aga nke ụgbọala nke gara aga nke ị na-abanye n'ọtụtụ igwe na igwe na-esite na mpụga nwere uru ma ọ ga-adịgide otu ebe ọ bụ na e mepụtara igwe kwụ otu ebe.
Otú ọ dị, nnukwu ọdịda, bụ na a ga-arụ ya mgbe niile, ihe nkedo na agbụ na-agwụkarị karịa akụkụ nke ụgbọ ala ma ọ bụ Rhythm drivetrain. M nnọọ na-amasị udi nke a igwe kwụ otu ebe, ọma, a nri ndụdụ na mgbe ahụ otu yinye ịnọ ala ebe a ka ị pụrụ ịhụ dum igwe kwụ otu ebe. Ọ na-echetara m ntakịrị ụdị ụfọdụ nke ọgba tum tum Ducati 996.
Agwara m na Kate Middleton na Prince William nwekwara otu, nwee olile anya na ị nwere ọ thisụ a, lelee ụfọdụ igwe kwụ otu ebe na Taipei Bike Show 2019 ma ọ bụrụ na ị nyere edemede ahụ isi mkpịsị aka, denye aha na GCN Tech Channel na mee ka anyi mata n’otu nke kacha masi gi? Na maka teknụzụ ndị ọzọ na-ekpo ọkụ site na Taipei pịa ebe ọ bụla n'okpuru.
Kedu onye na-eme ehi ehi MTB?
Ntọala na Germany na 1994,Nwa ehiawade a dịgasị iche iche nkeigwena nsonyeugwu igwe kwụ otu ebe, okporo ụzọanyịnya igwe, bụanyịnya igwe, ụmụakaanyịnya igwena ụdị ndị ngwakọ, ndị njem na ụdị obodo.03/20/2015
E-igwe kwụ otu ebe dị ọnụ ala ọ dị mma?
Anwụ ngwa ngwa na ụgwọ
Ọ bụrụ na anyị ga-atụle uru ọ bara maka ego, $ 598 dịworị nke ukwuuọnụ aladabere naigwe eletrikna-enwe nchegbu. Ọtụtụ nyocha dị mma na-ekwu na igwe kwụ otu ebe nwere ike inye nkeziigwe eletrikahụmahụ. A na-enye otuto dị ukwuu na batrị na-adịte aka maka ọnụahịa ya.
Kedu ọnụahịa mkpọsa nke igwe ehi ehi?
Mba * * * RRP = ọnụahịa mkpọsa akwadoro ** Akara nkọwa m dịgasị iche +/- 10% ma rụtụ aka na ọkara etiti etiti (gụnyere batrị maka e-bies) Ihe ndị ọzọ edeturu Njehie, ịpị njehie na mgbanwe teknụzụ nwere ike ime. Agba deviations pụrụ. ọnọdụ: maachị 2021
Kedu otu okpokolo agba dị na Bulls ebike?
Niile ehi niile nwere ezigbo ịnyịnya ígwè 27in nke nwere ike iji ya tụnyere Cube Compact Electric Bike na elu nke igwe kwụ otu ebe na-adị mfe ịkwụsị ya site na okpukpu abụọ ọ bụ ezie na ọ ga-ewekwu ụgwọ iji mee ka ọ na-agba ọsọ n'ihi na ọ dị arọ karịa nkezi ibu nke eku. Enwere m mmasị na teknụzụ kemgbe m mepere egwuregwu ụmụaka m.
Ebee ka m nwere ike ịzụta oke ehi E Bies igwe kwụ otu ebe?
International (Bekee) Netherlands France Belgique New Zealand Italia (Bekee) Polska Lietuva Ndị na-ere ahịa anyị, kọntaktị mpaghara gị Chọta onye na-ere ahia gị Ihe nzipu ozi nzuzo nzuzo Kuki International * * RRP = ọnụahịa mkpọsa akwadoro ** Nkọwa aha m dịgasị iche +/- 10% wee rụtụ aka ka a ọkara etiti size (incl. batrị maka e-bies)